गाैरिकाले रचिन् इतिहास : एउटै सागमा ३ स्वर्ण जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी
Homeखेलकुदगाैरिकाले रचिन् इतिहास : एउटै सागमा ३ स्वर्ण जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी
December 8, 2019 kandai kanda 1 खेलकुद
काठमाण्डौ : नेपालले एथ्लेटिक्स अन्तर्गत पौडीमा अर्काे एउटा पदक थपेको छ। जारी सागमा तेस्रो स्वर्ण जित्दै गौरिका एउटै सागमा ३ स्वर्ण जित्ने पहिलो महिला एथ्लिट बनेकी छिन। गौरिका सिंहले तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको पौडी विधामा तेस्रो स्वर्ण जितेकी हुन् । उनले पौडीको चारसय मिटर फ्रि स्टाइलमा भारतीय पौडीवाजलाई पराजित गरेकी हुन् ।
सातदोबाटोमा सम्पन्न महिला पौडीतर्फको चारसय मिटर फ्रि स्टाइलको दूरी गौरिकाले चार मिनेट २५ दशमलब २० सेकेण्डमा पुरा गरिन। उनले भारतीय पौडीवाज शिवांगी शर्मालाई प’राजित गरेकी छन। शिवांगीले उक्त दूरी चार मिनेट २६ दशमलव २२ सेकेण्डमा पुरा गरेकी थिइन । शिवांगीले रजत पदकमा चित्त बुझाउनु पर्यो । श्रीलङ्काकी रमुदी सहाराले कास्य पदक जितिन ।
सहाराले चार मिनेट ४९ दशमलब १० सेकेण्डमा चारसय मिटर दूरी पार गरेकी थिइन । गौरिकाले स्वर्ण दिलाए सँगै नेपालले तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा ४४ स्वर्ण जितेको छ । शनिबार सम्म ४३ स्वर्ण जितेको नेपाललाई आइतबार गौरिकाले पहिलो स्वर्ण दिलाएकी हुन् । तीन स्वर्ण र एक रजत जित्दै गौरिका एउटै साग खेलमा सर्वाधिक स्वर्ण जित्ने खेलाडी बनेकी छिन् । यसअघि एउटै सागमा दुई स्वर्ण जित्ने खेलाडी थिए ।
सागमा भाग लिन आएका ७ जना श्रीलंकन खेलाडीलाई डें गु सं क्रमण
भा’रतीय प्रधानमन्त्री मोदी के फे’रि नेपाल आउँदैछन् ?
संक्रमितभन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढी
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ६६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभर गरिएको ८ हजार ५४० पीसीआर र २ हजार ८१८ जनाको एन्टीजेन परीक्षणका क्रममा १ हजार ६६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या […]
‘युद्धबाट भाग्नेहरुलाई फेरि ल्याएर कमान्डर बनाउन सकिँदैन’
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले युद्धबाट भाग्नेहरुलाई फेरि ल्याएर कमान्डर बनाउन नसक्ने बताएकी हुन् । शनिबार सिन्धुलीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले युद्धबाट भागेका युद्ध अपराधीजस्तालाई किमार्थ माफी दिन नहुने बताइन् । ‘युद्धबाट भाग्नेहरुलाई फेरि ल्याएर कमान्डर बनाउन सकिँदैन’ उनले भने, ‘युद्धबाट भागेका युद्ध अपराधीजस्तालाई किमार्थ माफी […]
पार्टी कार्यालय उद्घाटन गर्दै ,नेपालले भने-‘जनताप्रति समर्पित हुन्छौँ
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)को पार्टी केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटन भएको छ । शुक्रबार बिहान अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नयाँ बानेश्वरस्थित मीनभवनमा स्थापित नयाँ कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् । पार्टी कार्यालय उद्घाटनका लागि मीनभवन पुगेका नेता नेपालले रिबन काटेर पार्टी कार्यालय उद्घाटन गर्दै अन्य बाँकी सांगठनिक संरचना निर्माण छिट्टै […]
पैसा बाँडेर गरिबी हट्छ ? देउवा सरकारलाई ओलीको प्रश्न
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पैसा बाँडेर गरिबी हट्छ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । बिहीबार (आज) काठमाडौंमा आयोजित बृहत् कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले ५ लाखलाई १० हजार एकपटक बाँडेर गरिबी बढ्छ ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका हुन् । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत असोजमा गरिबलाई १० […]
बोलेरो दु,र्घटना हुँदा सवार ४ जनामध्ये ३ जनाको मृ,त्यु
काठमाडौं । मन्थलीको कुनौरीमा बोलेरो दु,र्घटना हुँदा ३ जनाको मृ,त्यु भएको छ । बिहीबार बिहान काठमाडौंबाट ओखलढुंगा जाँदै गरेको बोलेरो दु,र्घटना हुँदा सवार ४ जनामध्ये ३ जनाको मृ,त्यु भएको र एक जना घा,इते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मन्थलीका प्रहरी निरीक्षक श्रीशंकर श्रेष्ठले लोकपथलाई दिएको जानकारीअनुसार बिहान […]
हेर्नुहोस् भाद्र २७ गते देखी असोज २ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
हेर्नुहोस् भाद्र २० गते देखी भाद्र २६ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
तपाइको यो साता कति शुभ ? हेर्नुहोस् भाद्र १३ गते देखी भाद्र १९ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
हेर्नुहोस् साउन ३१ गते देखी भदौं ५ गतेसम्मको साप्ताहिक भाग्यफल
२०७८ साल साउन २६ गते मंगलबार, हेर्नुहोस् तपाइको आजको भाग्यफल
के मोजाविना नै जुत्ता लगाउने बानी छ ? अनेकौं समस्या हुन सक्छ
फेशन भन्ने कुरा प्रायः बदलिरहेको हुन्छ । आजकल मोजाविना नै जुत्ता लगाउने फेशन चलेको छ । यसरी जुत्ता लगाउँदा आकर्षक त देखिएला तर यसले छालासम्बन्धी अनेकौं समस्या निम्त्याउँछ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार, मोजाविना जुत्ता लगाउँदा फंगल [...]
के तपाई लाई पायल्स को समस्या छ? किन हुन्छ पायल्स , जान्नुस यी कुरा हरु..
नेपालमा घट्दै सक्रिय कोरोना संक्रमित
एसिडिटीको समस्या छ ? अदुवाको रसमा कागती र मह हालेर पिउनुस्
नेपालमा ४४ जना कोरोना संक्रमितको मृ,त्यु
फेशन भन्ने कुरा प्रायः बदलिरहेको हुन्छ । आजकल मोजाविना नै जुत्ता लगाउने फेशन चलेको छ । यसरी जुत्ता लगाउँदा आकर्षक त देखिएला तर यसले छालासम्बन्धी अनेकौं समस्या [...]
दक्षिण भारतीय फिल्म इन्डस्ट्रीकी चर्चित स्टार सामन्था र नागा डिभोर्सको तयारीमा
काठमाडौं । दक्षिण भारतीय फिल्म इन्डस्ट्रीकी चर्चित अभिनेत्री सामन्था अक्किनेनी डिभोर्सको तयारीमा रहेकी छिन् । सामन्थाको दक्षिण भारतीय फिल्म इन्डस्ट्रीका स्टार नागार्जुनका छोरा स्टार नागा चैतन्यसँग २०१७ [...]
भाइबरले गर्‍याे नयाँ फिचरको सुरुआत
काठमाडौं । भाइबरले बिहीबार भर्चुअल कार्यक्रमको आयोजना गरी नयाँ फिचर सुरुआत गरेको छ । यो फिचर नेपाल, भियतनाम र फिलिपिन्ससहित एप्याक क्षेत्रमा पहिलो पटक सुरुवात गरिएको भाइबरले [...]
अक्षय कुमारकी आमाको निधन
बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारकी आमा अरणा भाटियाको निधन भएको छ । उनकी आमा विगत लामो समयदेखि बिरामी थिइन् । अक्षय कुमारले सोसल मिडियामा आफ्नी आमाको निधनबारे जानकारी [...]
जब कलेज पढाउने शिक्षकको प्रेममा परेकी थिइन् ऐश्वर्या
बलिउडकी सुन्दरी ऐश्वर्या रायको बारेमा विभिन्न तथ्यहरु बाहिरिन्छन् जसले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पनि पाउँछ । उनको बारेमा केही रोचक तथ्यहरु पनि चर्चामा आइरहन्छन् जसमध्ये उनको कलेज पढ्दाको [...]
फिल्म र टिभी वर्ल्डमा एसियाकै सबैभन्दा प्रभावशाली महिला बनिन् दीपिका पादुकोण
बलिउडका यी ५ लभ स्टोरी, जुन थाहा पाएपछि फ्यानलाई भयो पत्याउन मुस्किल
ऋचा शर्मा ‘कमेडी च्याम्पियन–२’ बाट बाहिरिइन्
केबीसीमा ५ करोड जितेका सुशील कसरी बने फेरी कंगाल ? यस्तो छ कहानी
‘म राजेश हमाल’मा हमालले नै अभिनय गर्न नमानेपछि…
काठमाडौं । बलिउडकी चर्चित एवं लोकप्रिय अभिनेत्री दीपिका पादूकोणले हालै एउटा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेकी छिन् । एसियाको सबैभन्दा प्रभावशाली महिलाहरुको सूची हालसालै जारी गरिएको छ । उक्त सूचीमा अभिनेत्री दीपिका पादूकोण टिभी र फिल्म वर्ल्डको श्रेणीमा शीर्ष स्थानमा रहेकी छिन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा अनुयायीहरुको आधारमा तयार पारिएको […]
काठमाडौं । बलिउडमा विभिन्न स्टारहरुको प्रेम, विवाह र जीवनका बारेमा धेरै चर्चा हुनेगरेको छ । धेरै स्टारहरुको आफ्नो आफ्नै कथा छ । बलिउडमा सम्बन्धहरु प्राय गोप्य राखिन्छ । यसको पछाडि धेरै कारणहरु हुन सक्छन्, तर धेरै स्टारहरुले आफ्नो प्रेम सम्बन्ध लुकाउन सफल हुन्छन् त कोही हुँदैनन् । राज […]
रोनाल्डोले डेब्यू गर्ने सम्भावना;प्रिमियर लिगमा आज ८ खेल
काठमाडौं। इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत आज शनिबार विभिन्न आठ खेल हुँदैछ । म्यानचेस्टर युनाईटेडले न्युकासल युनाईटेडसँग भिड्ने छ । युनाईटेडको घरेलु मैदानमा हुने खेल नेपाली समय अनुसार राति ७:४५ बजे सुरु हुनेछ । न्युकासलविरुद्ध मैदान उत्रदा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले डेब्यू गर्ने सम्भावना रहेको छ । १२ वर्षपछि युनाईटेड […]
नेपाली चेली तीजको दिन बंगलादेशसँग भिड्दै
काठमाडौं। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले आज (बिहीवार) बंगलादेश राष्ट्रिय महिला टोलीसँग पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा आज हरितालिका तीजको दिन नेपाली महिला टोलीले घरेलु मैदानमा डेब्यू गर्दैछ। अहिलेसम्म दशरथ रंगशालामा कुनै पनि खेल नखेलेको महिला टोली आजको खेलमा जित निकाल्ने दाउमा रहनेछ। चेली भनेर प्रख्यात […]
दुवै टोलीको एउटै लक्ष्य, दोस्रो खेल आज
काठमाडौं। नेपाल र भारतबीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आज (आईतवार) खेलिंदै छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा यी दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको खेल साँझ ५:३० बजे सुरु हुने तालिका रहेको छ। आजको खेलमा दुवै टोली जितको लागि मैदान प्रवेश गर्नेछन्। पहिलो खेल १-१ गोलको बराबरी खेलेका दुवै टोलीले खेलमा निर्णायक गोल गर्न […]